News - Ngwa nke Redispersible Latex ntụ ntụ
Ojiji nke Redispersible Latex Powder
Redipersible latex ntụ ntụ na-ejikarị arụ ọrụ ubi dị ka mpụga mgbidi mkpuchi, taịlị njikọ, ọgwụgwọ interface, bonps gypsum, stucco gypsum, ụlọ ime ụlọ na mpụga putty, ngwa agha eji achọ mma, wdg, nke nwere nnukwu ngwa ngwa na ezigbo ahịa atụmanya.
Ngwakọta polymer na-eme ugbu a n'ụwa dị ugbu a bụ: Vinyl Acetate Polyvinyl Acetate (VAC / E), Terpolymer nke Ethylene, Vinyl Chloride na Vinyl Laurate (E / VC / VL), Vinyl Acetate Ester na ethylene na elu faty acid vinyl ester ternary. copolymer roba ntụ ntụ (VAC / E / VeoVa), ụdị atọ a nke redispersible polymer ntụ ntụ na-achịkwa ahịa ahụ, karịsịa vinyl acetate na ethylene copolymer roba ntụ ntụ VAC / E, nwere ọnọdụ mbu na mpaghara ụwa, ma na-anọchi anya njikwa teknụzụ nke nyochaghari azụ. ntụ ntụ. Site na ahụmịhe ọrụ aka nke itinye ngwa ngwa-polymer gbanwere ngwa ngwa, ọ ka bụ ihe ngwọta kachasị mma:
1. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị eji eme ihe n'ụwa niile;
2. Ahụmịhe kachasị arụ ọrụ n'ọhịa ahụ;
3. O nwere ike mezuo akụrụngwa Rheological nke ngwa agha chọrọ (ya bụ, ọrụ achọrọ);
4. Polymeric resin na monomers ndị ọzọ nwere njirimara nke obere ihe na - agbanwe agbanwe (VOC) na gas na - ewe iwe;
5. Ọ nwere njirimara nke nguzogide UV dị mma, ezigbo okpomọkụ na-eguzogide na nkwụsi ike ogologo oge;
6, na nguzogide dị elu na saponification;
7, nwere widest iko mgbanwe okpomọkụ nso (Tg);
8. Nwere dịtụ mma keukwu bonding, mgbanwe na n'ibu Njirimara;
9. Nwere ahụmịhe kachasị ogologo na mmepụta kemịkalụ na otu esi enwe nkwụsi ike nchekwa na iwepụta ngwaahịa dị mma;
10.Ọ dị mfe ijikọta na mkpuchi mkpuchi (polyvinyl alcohol) nke arụmọrụ
Ihe onyonyo 1 bu onyonyo nke a ghaghi edocha achacha achacha nke ere n’ahia
Njirimara nke ntụgharị amịchagharị
1. Redispersible ntụ ntụ bụ mmiri a na-agbanye mmiri. Ọ bụ copolymer nke ethylene na vinyl acetate, yana mmanya polyvinyl dị ka colloid nchebe.
2. VAE ntụpọ latx nke a na-ahụ anya nwere ihe nkiri na-emepụta ihe, 50% ihe nrịba mmiri na-etolite emulsion, ma mepụta ihe nkiri plastik ka etinyechara ya na iko maka awa 24.
3. Ihe nkiri guzobere nwere ụfọdụ mgbanwe na nguzogide mmiri. Nwere ike iru ụkpụrụ mba.
4.Ledispersible latex powder nwere arụmọrụ dị elu: ọ nwere ikike nke njiri mara na arụmọrụ pụrụ iche, nguzogide mmiri pụrụ iche, ike njikọ dị mma, ma na-enye njigide nke alkali dị mma, nke nwere ike ime ka mmaji na ike ike na mgbakwunye na plasticity, na-eyi nguzogide na ịrụ ọrụ, ọ na-eme mgbanwe siri ike karị na ngwa agha na-eguzogide.
Ngwa nke latex ntụ ntụ na ntụ ntụ akọrọ:
Mort ngwa agha apịtị na akwa plasta: Redxpersible latex powder nwere ezigbo ezighi ezi, njigide mmiri na iguzogide nkwụchi, na ike agbụ, nke nwere ike idozi mgbawa na ọgbụgba nke dị na ngwa agha ọdịnala. Ihe ndi ozo mara mma.
Mort Ihe eji eme onwe ya ka ihe di elu na ihe eji eme ala: Nri ekpughere aehu nwere ike di elu, ezigbo nkpokorita, nnabata na ike mgbanwe. Nwere ike melite adhesion, nkwụsị abrasion na njigide mmiri nke ihe ndị ahụ. Ọ nwere ike na-ewetara ndị magburu onwe rheology, workability na kasị mma onwe-smoothing arụmọrụ ka n'ala onwe-leveling ngwa agha na screed.
Powder ntupo na-ejikọta ya, ihe na-esonye na taịlị: Redxpersible latex powder nwere ezigbo nrapado, njigide mmiri dị mma, ogologo oge mepere emepe, mgbanwe mgbanwe, nguzogide sag na nguzogide nkwụghachi. Ọ nwere ike iweta adhesiveness dị elu, nguzogide dị elu na ịrụ ọrụ dị mma maka ịgbado nke taịl, nrapado tile nke dị nha na ntanetị.
Mort ngwa mgbochi mmiri: Redxpersible latex powder na-eme ka njikọ nke njikọ dịkwuo ma belata, na-ebelata ịgbatị mmiri, na-eme ka njigide mmiri, belata ntopute mmiri, ma na-enye ngwa ahịa dị elu, nkwụghachi ihu igwe dị elu na ihe chọrọ mmiri na-egbochi mmiri dị elu. Ọ nwere mmetụta na-adịte aka nke sistemụ akara na ihe ndị chọrọ ngbanye mmiri na nguzogide mmiri.
Mort ngwa agha mkpuchi mgbidi: Redispersible emulsion powder na mpụga mgbidi mpụga sistemụ na-eme ka njikọta nke ngwa agha na ike ike banye na mkpuchi mkpuchi, ka ị wee nwee ike ịchọ mkpuchi mgbe ị na -ebelata ike ike. Iji mezuo ike ịrụ ọrụ dị mkpa, ike ike mgbanwe na mgbanwe na ngwa mgbokwasị mgbidi nke mpụga, ị nwere ike ịme ngwaahịa ngwa agha gị ka ọ nwee ezigbo ihe njikọta yana ọtụtụ ihe mkpuchi na ntọala ahụ. N'otu oge ahụ, ọ na-enye aka imeziwanye mmetụta nkwụsị na nkwụsị mgbape elu.
Ndozi Nkuzi: Ugbo ahihia eji anwughachi akpukpo ahu nwere ntughari a choro, ntughari, oke nkwekorita, ikike di nma na ikike agha. Mee ka igwe eji arụ ọrụ rụzuo ihe ndị a dị n’elu maka ịrụzi ihe eji arụ ọrụ na nke na-abụghị ihe owuwu.
◆ Ngwunye dị n'ime: A na-ejikarị ntụ ntụ edo edo mee ihe iji na-emeso elu nke ihe, igwe na-ekpu ekpu, brick ájá na-efe efe na ntụ ntụ, wdg, iji dozie nsogbu ahụ na ntanetị adịghị mfe ịrapara n'ihi mmịpụta mmiri ma ọ bụ ire ụtọ. , okpokoro plasta bụ ihe efu. Drum, cracking, peeling, wdg Ọ na-eme ka nkwụchi ahụ sie ike, ọ naghị adị mfe ịdapụ na mgbochi mmiri, yana ọkaibe na-enweghị atụ. O nwere nnukwu ọrụ na arụmọrụ dị mfe, owuwu dị adaba.
A na-ejikarị Redispersible ntụ ntụ:
Ime na mpụga mgbidi putty ntụ ntụ, ihe na-adọrọ adọrọ, taịlị na-esonye, ​​na-ahụ maka ntụ ntụ, mpụga mgbidi mpụga, ngwa agha na-arụ ọrụ, ngwa agha e ji achọ mma, ngwa agha mmiri, na mpụga mmiri na mpụga ikuku nke ikuku. A na-eji ngwa agha niile iji meziwanye mmebi iwu na akwa mgbanwe dị elu nke ngwa agha ciment ọdịnala, na inye ha mgbanwe kachasị mma na ike njikọta ike iguzogide na igbu oge ọgbọ nke mgbawa ciment. N'ihi na polymer na mortar na-etolite usoro ntanetị na-arụ ọrụ, a na-emepụta ihe nkiri polymer na-aga n'ihu na pores, nke na-eme ka njikọ dị n'etiti mkpokọta na-egbochi ụfọdụ pores na ngwa agha. Ya mere, ngwa ndagwurugwu agbachachara agbacha nwere arụmọrụ dị mma karịa ngwa ciment. Enwere ọganihu dị ukwuu.
Oge nzipu ozi: Mar-18-2018